Dr. Tint Swe's Writings: Taste change လျှာအရသာပျက်ခြင်း
Taste change လျှာအရသာပျက်ခြင်း
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျမ ကအသက် ၃၈ နှစ် အမျိုးသမီး ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ် ၂နှစ်၆ လ သား တယောက် ရှိပါတယ်။့့ မှာနေပါတယ်။ ရာသီ ပုံမှန်လာပါတယ်ရှင်။ ကျမ လျှာမှာ ခါးသလို ချိုသလိုခံစားရတာ ၃ လလောက် ရှိပါပြီ အဲဒါ က ပါးစပ်ကဖြစ်တာလား နှုတ်ခမ်းကဖြစ်တာလားတော့ သေချာမသိပါဘူး လျှာနဲ့ထိတဲ့နေရာတွေမှာ ချိုတဲ့အရသာ ခံစားရပါတယ် အစကတော့ ကျမက ကလေးလိုချင်နေတော့ ပါးစပ်ပျက်ချင်တာလားထင်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ မဟုတ်ပဲ ရာသီ ပုံမှန်လာနေပါတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး အကြံလေးပေးစေချင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
လျှာအရသာပျက်တာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ တချို့မှာ အရသာကို မရှိဖြစ်တယ်။ Ageusia ခေါ်တယ်။ အလွန်ရှားတယ်။
ခံတွင်း အင်ဖက်ရှင် ခေါ် ပိုးဝင်ခြင်း။ ဘဲလ်စ်ပေါ်လစီ ခေါ် မျက်နှာတခြမ်းလေဖြတ်ခြင်း၊ တချို့ဆေးတွေ၊ ဦးခေါင်း ထိခိုက်ခြင်းတွေကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
Medications ဆေးတွေကတော့ -
Hydrochlorothiazide (Esidix) and combinations
ခံတွင်းနဲ့သွားကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ သွားအတု၊ သွားနုတ်၊ သွာရောဂါ။
ဗီတာမင် ဘီ-၃ နဲ့ ဘီ-၁၂ နည်းသူတွေ၊ ဇင့်ဓါတ်နဲ့ ကောပါးဓါတ်နည်းသူတွေ၊ အာဟစာရနည်းသူတွေ၊ နာတာရှည် ကျောက်ကပ်မကောင်းသူတွေ၊ ကင်ဆာ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်။ ဦးခေါင်းထိခိုက်ခံရခြင်း၊ ဦးခေါင်းနဲ့ လည်ပင်း ဓါတ်ကင်ရခြင်း။
အဆိပ်ဓါတ်ငွေ့ benzene, benzol, butyl acetate, carbon disulfide, chlorine, ethyl acetate, formaldehyde, hydrogen selenide, paint solvents, sulfuric acid, thrichloroethylene စသည်။ chromium, lead, copper စက်ရုံသုံးဓါတ်တွေ၊
စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ အစားလုံးဝမစားချင်ခြင်း၊ အတက်ရောဂါရှိသူ၊ မိုင်ဂရင်းရောဂါရှိသူ၊ ဆီးချို၊ လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်း နည်းခြင်း၊ Sjögren's syndrome ရောဂါရှိသူ၊ Multiple sclerosis ရောဂါရှိသူ၊ adrenocortical insufficiency, Cushing's syndrome, panhypopituitarism, pseudohypoparathyroidism, Kallmann's syndrome, Turner's syndrome ရောဂါတွေရှိသူ၊
ရုတ်ရက်ဖြစ်တာဆိုရင် ဦးခေါင်းထိခိုက်ခြင်းကို စဉ်းစားရမယ်။ ဖြစ်လိုက် သက်သာလိုက်ဆိုရင် အလာဂျီ၊ ဓါတုပစ္စည်းတွေ သက်ရောက်မှုကို စဉ်းစားရတယ်။ တဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတာဆိုရင် နှာခေါင်းထဲအသားပို၊ နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်း အထက်ပိုင်းရောဂါတွေကို စဉ်းစားရမယ်။
လျှာမှာ ရောဂါရှိသလား။ Candidiasis မှက်ခရု၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ leukoplakia လျှာဖြူရောဂါတွေဖြစ်နိုင်တယ်။
အများအားဖြင့် အလိုလို သက်သာပျောက်ကင်းပါတယ်။ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းခံသိရင် ဖယ်ရှား ရှောင်ကြဉ်ရမယ်။ ကုသရမယ်။
▼ 2018 (3090)
ထောပနာ နှင့် ထောမနာ
လှလွန်းဆွေ နှင့် တင့်လှပေဟန်
Amniotic fluid leakage ရေမြွာရည်ဆင်းခြင်း
Baby and Mom ကလေးကျန်းမာရေး အယူအဆများ မလွဲမှားစေချ...
Labor Day လေဘာဒေး
The weak get eaten စာက လူကိုစား၍ နိုင်ငံရေးက တိုင်...
Number of Ancestors ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်
Encyclopædia Britannica ဗြိတိသျှစွယ်စုံကျမ်း
တကို တစ်လုပ်တော့ ဈေးနှုန်းတင်လို့ ကောင်းတာပေါ့
SOL Liver အသည်းအကျိတ်
Puberty Question သက်ငယ်မိန်းကလေး မေးခွန်း
Chocolate cyst ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးရေး ရောင်းရပါမယ်
Functional Medicine ဖန်ရှင်နယ် ဆေးပညာ
Alternative Medicine ဘိုဆေးနဲ့ ဗမာဆေး
Book Donation စာအုပ်အလှူ
Policy Books ပေါ်လစီစာအုပ်များ
Detoxing Scam ကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်တွေမရှိပါ
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး တစ်ကယ်ပဲ မဟုတ်
Wheat allergy ဂျုံနဲ့ မတည့်ခြင်း
ယောက် နှင့် ရောက်
The exiles ဇာတ်သိမ်းမလှတဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံရေး
Human Brain and Emotion ချစ်တာနဲ့ မေတ္တာ ဘယ်ကလာသလဲ
ဖျက် နှင့် ပြင်
No alcohol safe to drink အရက်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ စိတ်မခ...
Plantar fasciitis ခြေဖနောင့်နာရောဂါ
Medical Test Accuracy ဆေးစစ်ချက်တွေ ၁၀၀% မှန်သလား
Hoarseness of voice အသံဝင်နေလို့ပါရှင့်
Mother’s Hands အမေ့လက်
Fibrocystic breasts ရင်သားအကျိတ်တမျိုး
Terminally Ill နောက်ဆုံးဝေဒနာ
Omega အိုမီဂါဆေး မေးခွန်း
Sympathy Flowers စာနာမှုပန်း
ကိုယ်ဝန်နဲ့ အာထွာဆောင်း မေးခွန်း
One Thousand and One Nights တထောင့်တည
Medicines and Alcohol အရက်နဲ့တွဲရန်မသင့်သောဆေးများ...
An Old Photo လူဟောင်းတယောက်၏ အဟောင်းလေးတခု
သမိုင်း ကောင်း မကောင်း
Liver cancer အသည်းကင်ဆာ
စပ် စက် ဆက်
STDs Symptoms လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများ၏ လက္ခ...
Openness ပွင့်လင်းမှုဆိုတာ ကိုယ်တုံးလုံးနေတာမဟုတ်ပါ...
ပိုးသာကုန် မောင်ပုံ စောင်းမတတ်
မိန်ကလေးများ အမျိုးသမီးများ၏ မေးခွန်းများ
တခု တကောင် တယောက် အမှန်ပါလားဆရာ
Fainting (2) ရုတ်တရက် သိလက်လွတ်ဖြစ်ခြင်း
Liver transplants may be unnecessary thanks to new...
တိမ်မြုပ်နေသော မန်လည်ဆရာတော် နဲ့ အံတော်
Miss Brain မပျော့စိခင်ဗျာ နှစ်ခါနာ
Cancers ကင်ဆာ ကျဆုံးပါစေ
Diclofenac ဒိုင်ကလိုဖင်းနစ် အနာသက်သာဆေး (၁)
Menopause (1) သွေးမဆုံးခင်နဲ့ သွေးဆုံးရင် ဖြစ်ချင်...
Urinary Tract Infections in Children ကလေးဆီးလမ်းပိ...
Eating Habit (2) သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတထွာ
Cancer-Fighting Foods ကင်ဆာအတွက် အကောင်းဆုံးအစားအစ...
အပ် အက် အတ် အဒ်
ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၏ ရွှေစက်တော်သို့ ဘုရားဖူး